सिरहाको एउटा वडा कार्यलयमा चोरी - News Madhesh
सिरहा,१५ मंसिर । चोरले चोरी गर्यो यो घटना आजकल बिष्णुपुमा समान्य बनेको छ । यहि घटना केही दिन पहिला हुँदा बडो अफसोच साथ बुझ्थे र बुझ्नु पनि आतुर हुन्थे । तर एक पछि एक गरि बारम्बार घटनाहरु भइरहदा केही नौलो नभएको बुझ्न आउँछ । यती घटनाहरु घट्दा पनि यहाका सुरक्षा निकाय र सरोकारबाला निकाय कहि न कहि उदासिन र बचाराधिन भएको देख्छु ।
सिसि क्यामरामा चोर समात्न सजिलो हुन्छ भने ढुक्कका साथ क्यामरा जडान गरि निस्फिक्रका साथ समान सुरक्षा गर्ने रखबाला छदै छ नि सोच र लापरबाहीले घटनाहरु बढेको देखिन्छ ।
भर्खर मात्रै बिष्णुपुर गापा वडा नम्बर ५ मा कम्प्युटर र फोटोकपी मेसिन सहित चोरी गरेका छन । चतुर ती चोरले सिसि क्यामरालाई लाइन सर्ट गरि मेसिन नै बिगारेका छन । मैथिलीमा एउटा कहाबत छ ” रज बुद्धि से चोर बुद्धि भारी होइहै ” हुन: त भएका पनि छन र भइरहेका पनि छन ।
केही दिन पहिला मात्र मुख्य सडकको छेउमा रहेको एउटा गार्मेन्टमा पहिलो साझ मै चोरी भयो,भेटनरि अफिस लगायत मोटर साइकल चोरी,पानी तान्ने मोटर चोरी लगायतका यी समान्य घटनाको त कुरै छोडौ । यी घटनाहरु घटाउने मुख्य योजनाकार को छन त ? किन बारम्बार यहि ठाउँमा चोरी बढनुमा कस्को कमिकमजोरि छन त ? चोरी समान्य घटना लागेपनि यसलाई हामिले बढाब दिनु भनेको डकैती,हत्या हिंसा र बल्तकार लाई निम्तो दिनु हो ।
यसमा हामी कहि चुकेका त छैनौ चाहे राजनितिक दल ,स्थानीय सरकार,सुरक्षा निकाय र स्थानीय बासिन्दा किन नहोस हामी ठूलो दुर्घटनाको सिकारको दलदलमा फसिरहेका छौ ।
भट्टि पसल साझ पर्ना साथ बन्द हुनुको साटो प्रहरिलाइ लाइन मिलाएर अबेर रातीसम्म खोल्न कुनै बन्देज छैन । अबैध घरेलु मदिराको राम्रै ब्यापार छ जहा त्याहा लुटपात र चोरी त समान्य नै हो ।
सिसि क्यामरा छ हामी चोरलाई समात्छौ भन्ने ढुक्क छन तर बिडम्बना छ,सिसि क्यामराले एउटा हेल्मेट चोरी गर्ने चोरलाई समेत हेरेर पनि चिन्न गार्हो छ हेरे पनि मान्छे नै को छ भने चिन्न सकिदैन । त्यसैले,असुरक्षित हैन सुरक्षित हुनका लागि नागरिक समाज जाग्नै पर्छ र यस्तो बेथिती विरुद्ध लाग्नै पर्ने छ ।
हामी नबोले कस्ले बोल्देला,आफ्नो समानको सुरक्षा आफै नगरे कसले गरदेला र त्यसैले आफ्नै गाउँ आफ्नो ठाउँ आफै बनाउ ।
प्रकशित मिति : 2021-12-02